Iikhosi ze-Makeup ezikwi-Intanethi - Ubugcisa Professional
Ukukhulelwa Impilo Nokuzilolonga
Iphepha Lamaxabiso Antique
Iikhosi ze-Makeup ezikwi-Intanethi
Ukufunda akusaphelelanga kwigumbi lokufundela. Inkqubela phambili kwitekhnoloji iyitshintshe kakhulu indlela yokufumana kwethu ulwazi, kunye nabo banomdla kwimfundo nakwizinto zobugcisa ezinokufunda izinto ezisisiseko kwi-intanethi. Iikhosi ze Makeup ngumzekelo omnye njengoko abafundi benokubhalisa kwaye bafunde kubuntofontofo bamakhaya abo.
Isikolo sokwenza iQC
Olunye lolona khetho luthandwayo kukuba Isikolo sokwenza iQC . Ibikho ukusukela ngo-1984 kodwa iye yatshintshela kwiiklasi ezikwi-Intanethi, inika uluhlu olubanzi lwezifundo ezinxulumene nobuhle kumanqanaba ngamanqanaba ezakhono. Oko kubandakanya:
Ubugcisa bobugcisa ($ 1400)
Ubugcisa be Makeup yobugcisa ($ 1550)
Indawo yokusebenzela yePro Pro ($ 900)
Ubume obukhethekileyo beFX ($ 1350)
Ubuso bebrush yomoya ($ 1050)
Ubuhle behlabathi ($ 1050)
Isitayile sefashoni ($ 1300)
Izinwele zokuThintela iinwele ($ 1000)
Uphuhliso lwePotifoliyo ($ 500)
Iikholeji ezineeKhosi zeNtatheli ezikwi-Intanethi
IMAC. Iiklasi zoBumba
Ixabiso elincitshisiweyo lokuthambisa iAbrbrush
Ikhosi nganye inamavidiyo asuka kwigcisa lobugcisa UNathan Johnson , osebenze kwiProject Runway, ebengummeli wohlobo lweCover FX Skincare, kwaye ufake isicelo kumakhulu abathengi be-A kubandakanya uPaul McCartney, uLea Michele, kunye noLiza Minnelli. Ukongeza kwiividiyo zoqeqesho ezikwi-Intanethi (inkampani ikwathumela iikopi zeDVD, iincwadana ezinemiyalelo, kunye namaphepha ezabelo), iQC Makeup Academy ithatha indlela.
Izabelo ezibhaliweyo kunye neefoto zokwenza isicelo kufuneka zilayishwe kwiziko labafundi abakwi-Intanethi. Ukusuka apho, umhlohli uyabajonga kwaye unike inqanaba kunye nengxelo yeaudiyo. Abafundi bakhuthazwa ukuba baziqhelanise kunye nabahlobo kunye namalungu osapho. Isatifikethi sinikwa emva kokuba yonke imisebenzi igqityiwe kwaye iphononongwe.
Zininzi izinto ezintle ekufuneka ziqwalaselwe. Iingcali zenkxaso yabafundi zinokufikelelwa nge-imeyile, ngefowuni, okanye ngeNgxoxo ebukhoma ngalo naliphi na ixesha losuku. I-QC Makeup Academy ikwaqinisekisiwe yiZiko eliNgcono leShishini, ibonelela ngezicwangciso zokuhlawula ezahlukeneyo, kwaye uninzi lwezifundo ziza nefayile ye- ikhithi yokuqalisa yokwenza simahla. Kukho iikhosi ezenzelwe abantu kuwo onke amanqanaba ezakhono kunye nemvelaphi.
Abagxeki iziqinisekiso zokwenza i-Intanethi Ungakhathazeki ukuba ukungaboni ubuso ngobuso kwenza kube nzima ngakumbi kubaqeqeshi ukugxeka ngokuchanekileyo umsebenzi. Abanye abantu bakwafumanise ukuba iiklasi ezikwi-Intanethi ezinje ngeQC Makeup Academy zazisebenza ngakumbi ukuba sele unamava okufaka izithambiso kuwe nakwabanye.
Isikolo sokwenza i-Intanethi
Enye inkampani enceda abafundi ukuba babe ngabazobi abaqinisekisiweyo Isikolo sokwenza i-Intanethi . Yapapashwa ngo-2009 kwisiXeko saseNew York, ezi zifundo zikwi-Intanethi ziyenye yeendlela kwabo bangakwaziyo ukuya kwiSikolo soPhuculo saseNew York. Iiklasi zifundiswa ziingcali zeshishini kwaye zigubungela iziseko, ezokutshata, nangaphaya. Iikhosi ezikhoyo zezi:
Ikhosi ebalulekileyo yokuBumba ($ 700)
Ikhosi yoPhuculo oluPhambili ($ 500)
Ikhosi ye-Master Makeup Course ($ 1200)
Inkqubo yePro Hairstyling ($ 550)
Abaqeqeshi kunye noLwazi oluBalulekileyo
Ngelixa ezinye izikolo ezikwi-Intanethi zifundiswa ngumyaleli omnye oyintloko, kwi-Intanethi i-Makeup Academy ineqela labaqeqeshi abaqeqeshiweyo. Oko kubandakanya Nina THENGA (osebenze noVogue Russia, Glamour, kunye namanye amaphephancwadi), Mariana inkunzi (igcisa elizimeleyo elinamava asebenza kwiiseti zefilimu ezizimeleyo, koomolokazana, nakwimithambo yefashoni), U-Elizabeth Ray (igcisa elifundiswe nguAmanda Shackleton), kunye UPaulina Pecak (utitshala ozinikeleyo onemithombo yeendaba eqinileyo elandelayo). Umhlohli ngamnye uzisa ubungcali obuthile kule khosi, ukutyebisa amava okufunda.
Abafundi banikwa ukufikelela kwiwebhusayithi kunye nokungena okhethekileyo. Ukusuka apho, bayakwazi ukubukela iividiyo zokufundisa kwaye basebenze ngothotho lwezabelo, eziya kuthi zijongwe kwakhona ngaphambi kokufumana ingxelo. Ekupheleni kwekhosi, abafundi kufuneka bagqibe ukhetho lokugqibela kwiimviwo zokuphumelela ukuze bafumane isiqinisekiso.
Izinto eziluncedo nezingeloncedo
Iikhosi ze-Makeup Academy ezikwi-Intanethi ziza neengcali Ikhithi yegcisa lobugcisa ukongeza kwiiklasi ezizezona. Ukukhethwa kweemveliso kuxabisa ngaphezulu kwe- $ 400 kwaye kubandakanya izinto ezivela kumgangatho ophakamileyo kunye nakwiivenkile zeziyobisi. Abathweswe izidanga kwezi nkqubo bafanelekile kwizicelo zeKhadi lePRO ukufumana ipesenti yezakhelo kwiinkampani ezinje ngeMakeup yoNaphakade, iL'Oreal, iStila, iBecca, kunye nokunye. Kukho isiqinisekiso sokubuyiselwa imali seentsuku ezingama-21 ngokunjalo ukuba awonelisekanga yiklasi ngaso nasiphi na isizathu.
Into ekufuneka uyiqwalasele lixesha eliza kukuthatha ukuze ugqibe ikhosi. Nangona abanye bekwazi ukugqiba ngokukhawuleza, abafundi abangalifumaniyo inqanaba lokupasa kwizabelo ezifanelekileyo kufuneka baphinde benze isicelo sokwenza izithambiso kwaye bangenise isabelo kwakhona. Iindaba ezimnandi? Oku kunokwenziwa amaxesha ngamaxesha njengoko kufuneka.
Isikolo se-Makeup se-AOFM
Ukufumana ubungangamsha bamanye amazwe, jonga ukubhalisela Isikolo se-Makeup se-AOFM . Isikolo sabo sokuqala sasekwa kwiminyaka elishumi eyadlulayo eLondon, kunye nezikolo eNew York, eParis naseBelfast. Inkampani eyaziwayo ukusukela oko yenza ukuba ukufunda kufikeleleke ngakumbi, kunye nezifundo ezikwi-Intanethi ezibandakanya:
iingoma kunye nomdanisi kwisihloko
Ikhosi yoKwenza ($ 1350)
Isatifikethi esongezelelweyo: Ibhrashi yomoya eyiNgcali kunye neTemptu
Akukho mathandabuzo ngayo: I-AOFM inegama elidumileyo. Kungenxa yoko le nto beqhayisa ngokubonisa iitalente kwi Iqela elahlukileyo ngaphezulu kwamahlanu amagcisa okuzenzela. Ukuqinisekisa ukuba wonke umfundi ufumana olona qeqesho lubalaseleyo, abafundi badityaniswa nomcebisi ukubanceda kule nkqubo. Abanye babacebisi kubandakanya: UPhillippe Miletto (osebenze noVogue Italy, imagazini iZoo, Sleek, nokuninzi), ULouise Dartford (ufake isicelo kubantu abadumileyo baseBritane), kwaye Yin Lee (umculi wefashoni ephezulu kunye namava asebenza no-Alexander McQueen, Moo Eyewear, kunye nokunye).
Nje ukuba abafundi babhalise, banikwa ukufikelela kwiividiyo ezingaphezu kwama-250 zemfundo kunye namaphepha angaphezulu kwama-350 e-AOFM oqeqesho kunye neengcebiso, amaqhinga, kwaye kufuneka-abe neenkcukacha zolwazi. Ikhosi yohlulwe yangamacandelo (kukho ibar yenkqubela phambili yokujonga ukuba ukude kangakanani kwinkqubo okhoyo) kwaye ikugcina usendleleni enkosi kwinkomfa yevidiyo. Uvavanyo olwenziwayo lwenziwa phakathi kwaye njengenxalenye yesabelo sokugqibela, apho umcebisi wakho aza kuxoxa khona ngawo onke amandla, ubuthathaka, kunye neendawo zokuphucula. Isatifikethi esisayiniweyo sithunyelwa ngeposi sivela kwaNdlunkulu we-AOFM eLondon xa sigqityiwe.
Amanqaku aqinisekileyo kunye neNgcono
Ukongeza kwii-tutorials zokufundisa, kukho iividiyo ezingasemva kwemiboniso ebonisa indlela ubomi obubonakala ngayo njengegcisa elisebenza ngokuzimeleyo, kunye nezaphulelo kumakhulu eempawu (kubandakanya isaphulelo seMAC), kunye nethuba lokusebenza Umboniso wefashoni (abafundi ababini ngonyaka bafumana zonke iindleko ezihlawulelwayo zokuba kunye ne-AOFM iseti). Kukho kwakhona ikhithi yokuqala Igcwele kwiimveliso ezivela kwi-MAC cosmetics, iseti yebrashi ye-AOFM, kunye nokukhethwa kweemveliso zononophelo lolusu kwiDermalogica.
Nangona uninzi lwezikolo ze-intanethi zifundisa ngeeklasi ezahlukeneyo ukuze zilungele amanqanaba ezakhono ezahlukeneyo kunye nezinto ezinxulumene nobuhle, i-AOFM ekwi-Intanethi yeSikolo sokuGcina igcina ilula. Nangona banazo iziqinisekiso ezibini ezongezelelweyo, eyona nto kugxilwe kuyo ikhosi eyintloko yokwenza. Oku kunokubonwa njengokubuyela umva ngabathandi bezinto zokuzilungisa abajonge ukuya ngaphaya kweziseko okanye bafuna ukuqhubela phambili nezakhono zabo ngoqeqesho olukhethekileyo.
Amagcisa ngaphakathi kweZiko leMfundo
Kukho i- Amagcisa ngaphakathi kweZiko leMfundo ukucingela. Nangona baneeklasi ezizezakho kunye nenani leenkqubo zediploma, iikhosi zabo ezikwi-Intanethi lukhetho oluthandwayo kwabo bafuna ukuba ligcisa lokwenza izinto. Iikhosi ze-Intanethi zibandakanya:
Inkqubo ye-Makeup 101 ($ 565)
Inkqubo yoKwenza kweMasters ($ 1200)
Into ekufuneka uyazi
Iiklasi ezikhoyo zifundiswa ngumseki kunye nomlawuli weeGcisa ngaphakathi kweZiko leMfundo, UTara Anand . Usebenze njengegcisa likazwelonke likaLaura Mercier, umsebenzi wakhe ubonakalisiwe kwiimagazini ezinje ngeAllure, Flare, InStyle Weddings, Fashion Magazine, Marie Claire, kwaye ufake isicelo sokwenza umboniso wefashoni nakwabantu abadumileyo.
Ekubhaliseni, abafundi banikwa ikhowudi yokungena eyabavumela ukuba baqale inkqubo. Iqala ngentshayelelo ehamba kuwe malunga nokulindela kunye nendlela yokugqibezela iimodyuli nganye kwezi zifundo. Ukusuka apho, abafundi bafunda izinto abazinikiweyo, babukela iividiyo kwi-intanethi, kwaye bagcwalisa imibuzo kunye nokunikezelwa kweethiyori. Kumanqaku athile, abafundi baya kufuna ukulayisha imifanekiso yeendlela zesicelo ukufumana ingxelo ngazo. Kukho uviwo lokugqibela kwikhosi nganye kwaye wakuba ugqityiwe, kunikwa isiQinisekiso soBugcisa bobuGcisa.
Amandla kunye nobuthathaka
Inkqubo nganye inesakhiwo inkqubo yemodyuli (zine iimodyuli zizonke, zinamacandelwana kwicandelo ngalinye) ukuqinisekisa ukuba inkqubo yokufunda ilayini kwaye uhlala usakha kulwazi olufundileyo. Le asethi kuye nawuphina umntu othanda umbutho omncinci! Ezi zifundo zinamacandelo anikezelwe kwizihloko ezahluke kancinane kunezinye iikhosi ezikwi-Intanethi. Umzekelo, kukho iiklasi ezinxulumene nokusetyenziswa kobuqili obukhulileyo, ukwenza i-invoyisi, ukuzithengisa, kunye nokujonga kwakhona ukubonakala kwemagazini.
Nangona kunjalo, abo basokolayo kulawulo lwexesha kufuneka bazi ngento enye: ikhosi leyo kufuneka igqitywe kungaphelanga nonyaka. Ngaphandle koko, kukho iindleko ze- $ 135 kwinyanga nganye eyongezelelweyo. Nangona abanye abafundi benokukuxabisa ukuba nomhla obekiweyo, abanye banokukufumanisa kuluxinzelelo, ngakumbi ukuba ikhalenda yabo igcwele kakhulu.
IVizio Makeup Academy
IVizio Makeup Academy sesinye isikolo se-intanethi sezinto zokuhombisa. Iinjongo zabo kukulungiselela abafundi ukuba basebenze ngobungcali kumzi-mveliso wokwenza izinto, nokuba kunjalo njengegcisa lokuzimela, ukwenza izicelo zomtshato, okanye ukusebenza kwifilimu okanye kumabonwakude. Izifundo abazinikezelayo zibandakanya:
Ikhosi yokwazisa yokwazisa ($ 200)
Ikhosi ye-Master Makeup Course ($ 300)
Ikhosi yeNkulumbuso yeKhosi ($ 400)
Ikhosi ye-Elite Special Makeup eneFX ekhethekileyo ($ 800)
Okungakumbi malunga neNkampani kunye nezifundo
Isikolo sasekwa ngamagcisa ezinto zokuhombisa Anastasia Andreani kunye Misha Barcelona . Injongo yabo yayikukususa ukudideka okubangelwa zizifundo ezininzi ze-YouTube kwi-intanethi, kwaye endaweni yoko, benze iikhosi ezibonelela ngemiyalelo yamanyathelo ngamanyathelo kunye nolwazi olubalulekileyo. Ngokungafaniyo nezinye izikolo ze-intanethi ze-Makeup, iVizio Makeup Academy inamavidiyo avela kwiititshala ezahlukeneyo. Oko kubandakanya umculi okhethekileyo weFX UNatasha Morley kunye neqela labazobi bezinto zobugcisa.
Kwisithuba seeyure ezingama-24 ubhalisile eklasini, unikwe inombolo eyodwa yesazisi somsebenzisi. Oko kuvumela abafundi ukuba bangene kwiwebhusayithi kwaye baqale uqeqesho lwabo. Kukho iincwadi zokufunda, kunye nevidiyo ezikwi-Intanethi, iimvavanyo, kunye nokunikezelwa okwenziwayo, okuhlelwe ngumculi. Nje ukuba umfundi afumane ibakala lokupasa kuyo yonke imisebenzi eyimfuneko, isikolo siya kukhupha isatifikethi sokugqitywa.
Amagqabantshintshi kunye nemiceli mingeni
Ngelixa amaxabiso ekhosi ekwi-Intanethi enokwahluka kakhulu ukusuka esikolweni ukuya esikolweni, iVizio Makeup Academy ikwicala elifanelekileyo. Oko kuyenza ibe lukhetho oluhle kwabo bafuna ukufunda kodwa banqunyelwe kwimali. Ukongeza, abafundi abaphumeleleyo banikwa ithuba lokufaka izicelo zezaphulelo kwi-cosmetic besebenzisa isatifikethi sokugqitywa, besenza ukuba kube lula (kwaye kufikeleleke ngakumbi) ukwakha ikiti yobungcali.
Kukho umda wonyaka omnye kwikhosi, ke khumbula loo nto ngaphambi kokuba ubhalise. Kwakhona, gcinani engqondweni ukuba ngelixa ezinye zeeklasi ziza nezixhobo zokuqala (ezenziwe nge-powders, blushes, eyeshadows, kunye nemveliso yemilebe), ikhosi yokwazisa ayenzi njalo. Jonga ngokusondeleyo ukuba iklasi nganye ibandakanya ntoni ukuze ukhethe eyona ilungileyo kwiimfuno zakho.
uyenza njani imilebe yomlomo ukusuka ekuqaleni
Izibonelelo zokufunda kwi-Intanethi
Izikolo ezininzi zokuhombisa zijike kwi-Intanethi ukufikelela kubafundi abaninzi kunye nokugcina ishishini lobuhle elihlala litshintsha. Kunye ezininzi abafundi bakhetha ukufunda kwi-intanethi , le yimeko yokuphumelela. Kwabo bacingile ngokubhalisa, qaphela oku kulandelayo:
Iikhosi zokwenza i-Intanethi zifikeleleke ngakumbi kuneeklasi zesiko. Ngelixa izixeko ezikhulu zinokubanokhetho oluninzi olufumanekayo, iidolophu ezincinci kunye needolophu zisenokungabinako, ezinokwenza kube nzima kwabo banqwenela ukuba ngabaculi bezinto zokuzilolonga. Ezinye iindlela, ezinje ngeeklasi ezikwi-Intanethi, vumela uluhlu olubanzi lwabantu ukuba babhalise kwaye bafunde.
Ukuguquguquka kwenza kube lula ukulungela ukufunda kubomi bakho obuxakekileyo. Oku kusebenza kakuhle kubantu abasebenza ngokusisigxina okanye ngeshedyuli yemihla ngemihla. Abafundi ababhalise kwiiklasi zokwenza i-intanethi banokuhamba ngokukhawuleza okukhulu okanye kancinci njengoko ishedyuli yabo ivumela.
Iiklasi zixhaphake kakhulu kwizinto abazibonelelayo. Umzekelo, zinokusetyenziselwa ukuphucula izakhono esele zikho, ukuqala, okanye ukuqala ikhondo lomsebenzi wobugcisa njengegcisa lobugcisa. Uluhlu lweeklasi kunye nezatifikethi zithetha ukuba abantu banokukhetha into evakalayo kwinqanaba labo lesakhono kunye neenjongo zexesha elide.
Amaxabiso athambekele ekubeni afikeleleke ngakumbi kwi-Intanethi kunokuba ubuya kuya kwisikolo somzimba. Kuba eyokugqibela ineendleko ezahlukeneyo zokusebenza, izifundo zihlala zinyuka, zisenza kube nzima ngakumbi ukuba abafundi babhalise. Amaxabiso asezantsi kwizifundo ezikwi-Intanethi (kunye nezaphulelo kunye nezicwangciso zokuhlawula ezinikezelwa ziinkampani ezininzi) zenza ukuba zifikeleleke ngakumbi.
Ukuqala iKhosi yokuKhangela kwi-Intanethi
Ishishini lobuhle liyanda. Inqaku lezeMali lezeMali elinxulumene nomzi mveliso wezithambiso likugxininisile oku umdla okhulayo , ukufumanisa ukuba abathengi (ngokukodwa iwaka leminyaka) bathenga iipesenti ezingama-25 ngaphezulu kunakwiminyaka emibini eyadlulayo, kwaye ingeniso eSephora iphindaphindwe kabini ukusukela ngo-2011. Ngenxa yoko, ubugcisa bobugcisa buye baba lukhetho oluthandwayo lomsebenzi. Kulabo banomdla wokufunda kwi-Intanethi, kukho iikhosi ezininzi ezinokuthi ziqwalaselwe, ezinjengezo zichazwe apha ngasentla.
Ukugqitywa kwekhosi ekhompyutheni sisiqalo nje. Nje ukuba ube nezakhono ezisisiseko kunye nolwazi, thatha uqeqesho lwakho inyathelo elinye ukuya phambili. Ziqhelise ukufaka isicelo kuwe, kubahlobo, kumalungu osapho, kubasebenzi kunye nakowuphi na umntu ovumayo! Amava onawo osebenza kwabanye abantu, kokukhona uya kuziva ukhululekile xa ixesha lifikile lokusebenza ngobungcali.
Yandisa uLwazi kwaye wandise iZakhono zakho
Akukho mida kwinto (okanye phi) onokuyifunda. Kuluhlu olukhulu lweekhosi zokwenza i-intanethi onokukhetha kuzo, ukufumana oko kukusebenzelayo kulula njengokucofa imouse. Cinga ukhetho ngalunye ngononophelo ngaphambi kokwenza ukhetho lwakho. Kungekudala, uya kuba ulungele ukwandisa ii-horizons zakho ngeendlela ezintsha nezinomdla.
Candle Parties Gourmet Desserts Uqhawulo-Mtshato Nemali Ubambiso Ukubuyiselwa Kwemali Umtshato Wokuziphatha
Amakhaya Khuseleko Tips
I-Gluten Free Foods
Ukuhamba Ngenqanawa Cruise Destinations
Iindleko Ze-Costume Iifowuni
ngowuphi owona mdlalo ulungele isagittarius
umnikelo we-amvets uthatha ecaleni kwam
www ekujoliswe kuyo kubhaliso lomtshato fumana
Ufumana njani imikrwelo ngaphandle kweglasi
Umama wengubo yomtshakazi yomtshato waselwandle
ubunzima bomndilili obhinqileyo oneminyaka eli-14 ubudala 5'2
ukucoca ifriji enuka njani